कम्युनिष्टले लोकतन्त्र समाप्त गर्ने षडयन्त्र गर्दै छन् - फरमुल्लाह मंसुर | Lumbini Aawaz
कम्युनिष्टले लोकतन्त्र समाप्त गर्ने षडयन्त्र गर्दै छन् – फरमुल्लाह मंसुर
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एंवम बारा क्षेत्र न: ३ का प्रतिनिधी सभा सदस्य उम्मेदबार श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मंसुर सँग नेपालनितिका उपसम्पादक सरोज अर्याल र प्रतिमा पोख्रेल ले गरेको ५ प्रश्न ।
तपाँईको राजनीतिक पृष्ठभुमिबारे बताईदिनुस ?
२०२८ सालमा भारतको पटनामा विपिको हातबाट नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिएर विधिवत रुपमा राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको थिए । मैले कांग्रेसबाट अग्रणी मोर्चामा रहेर विभिन्न कालखण्डमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको लडाइँ लडे । पाँच पटकसम्म जेल जीवन भोगे अनि सयौं पटक प्रहरी थुनामा परेर दुई बर्ष भारतमा प्रवासी जीवनसमेत बिताएको थिए । पञ्चायत कालमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन लगायत राजकाज मुद्धा पनि मैले खेप्नु पर्यो । मेरो सानै देखिको नेतृत्वदायी भुमिका कारण मलाई चिन्ने जतिले पहिले देखि नै नेताजी भनेर बोलाउने गरेका छन् ।
लामो समय राजनीतिमा लाग्नु भयो, राजनितिमा लागेर के कमाए जस्तो लाग्छ तपाँईलाई?
राजनीतिक जीवनमा मैले जनताको माया र विश्वास कमाए जुन अति नै कम नेताले कमाउन सक्दछन् । राजनीतिमा आउनु अघि घरको आर्थिक समस्या टार्न मैले कलैया बजारमा जुत्ता पसल गरे । मेरो पसल कांग्रेस कार्यकर्ताको जमघट हुने थलो बनेको थियो । जुत्ता पसल गर्दै गर्दा मेरो मनमा देश र जनताका लागि पञ्चायती व्यवस्थाको जरो किलो नै फाल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । जेल परेर २०३६ सालमा छुटेपछि मैले पत्रिका बेच्ने पेशा थाले । मेरो संघर्षका गाथा अत्यन्तै मर्मस्पर्शी छ । मेरो घरपरिवार र सम्पति छैन् । बृद्ध अवस्थामा बस्नका लागि मेरै पहलमा बारामा सञ्जिवनि बाटिका बृद्ध आश्रम बनाएको छु । सक्दासम्म राजनीतिमार्फत जनताको सेवा गर्छु र जुन दिन सक्दिन त्यो दिनबाट बृद्ध आश्रम मै गएर बस्छु ।
तपाँई ले दोश्रो संविधान सभामा जनता सँग के के प्रतिबद्दता गर्नु भएको थियो र बिजयी भएपछि के के पुरा भए ?
म दोश्रो संविधान सभा सदस्यमा बिजयी भएर जाँदा दुई वटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिए र त्यो मैले पूरा गरेको छु ।
१. संविधान निर्माणमा अहम् भूमिका निर्वाह गरी समाजमा आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक लगायत विभिन्न हिसाबमा पछि परेका दलित, थारु, मुसलमान, मधेशी, जनजाति, महिलालाई समानुपातिक, समाजिक न्यायको हक राज्यको हरेक निकायमा हुनेछ भन्ने अधिकार स्थापित गराउन सधै संसदमा आवाज उठाउनुका साथै संविधान संसोधन गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गरे ।
२. विकास निर्माण
मानमत मटिअर्वा सडकको बिकास, बजेट निकासा, टेन्डर तथा शिल्यानासका काम गरे । यस सडक खण्डले विरगञ्ज औद्योगिक करिडोरसँग जोड्ने काम गर्छ । जसका कारण बारा क्षेत्र नं. ३ मा धेरै उद्योगहरु स्थापना हुनेछन् र स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना हुनेछ । रोजगारीको सिर्जना हुने बित्तिकै बारा क्षेत्र नम्बर ३ को जनताका आर्थिक जिवनस्तर विकासमा अग्रिणी भूमिका खेल्नेछ । मेरै पहलमा मोतिसर फेटाह कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य भएको छ । यस सडकको स्तरोन्नतिले बारा क्षेत्र नं. ३ का गाँउहरुलाई सहर सम्म जोड्ने काम गरेकोे छ । मेरै पहलमा कलैया अस्पतालको स्तरोन्नति तथा अस्पतालको निर्माणका लागि संसद विकास कोषबाट रु ४० लाखको निकासा भएको छ । रामराजा कलेजलाई स्तरोन्नति निम्ति मैले १० लाख निकासा गराएका छु ।
बाराको बिकासका निम्ती तपाईका मुख्य योजनाहरु के के रहेका छन् ?
पर्सा र बबरी नदीका दुवै किनार माथि चुरे पहाड देखि भारतको सिमाना सम्म नै तटबन्ध लगाउने योजना अघि सारेको छु । नदीको सतह माथि आएर खेतीयोग्य जमिन कटान गरिरहेको छ, त्यसलाई यस योजनाले रोक्ने विश्वास मैले लिएको छु ।
औद्योगिक विकास तथा कलकारखानाको निर्माण गर्ने योजना छ जसले गर्दा रोजगारीको ढोका खुली स्थानीय बासिको जीवनस्तर उकास्न मह्त्वपुर्ण भुमिका खेल्ने मैले विश्वास लिएका छु । साथै शैक्षिक संस्थाको थप विकास तथा स्तरोन्नतिको लागी योजना अगाडी सारेको छु मेरै पहलमा कलैया अस्पतालको स्तरोन्नति तथा अस्पतालको निर्माणका लागि संसद विकास कोषबाट रु ४० लाखको निकासा भएको छ । रामराजा कलेजलाई स्तरोन्नति निम्ति मैले १० लाख निकासा गराएका छु । त्यसैगरी आधुनिक कृषि व्यवस्थापन गर्न मैले जोड दिएको छु । क्षेत्रभर सामुदायिक भवनहरु निर्माण लगायत पक्की सडक पार्कहरुको निर्माण गर्ने तथा खानेपानी र ढल व्यवस्थापन गर्न आबश्यक कदम चाल्ने योजना मैले अघि सारेको छु ।
अन्तयमा कांग्रेसलाई नै मत किन ?
बिपि कोइरालाले लिएको बहुदलीय संसदिय व्यवस्था नै सविधानमा स्थापित भएको छ । नेपाली काँग्रेसका शुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नै संविधान जारी भएको हो । सबैभन्दा पुरानो पार्टीे र राष्र्टीय पार्टीको हैसियतले कांग्रेसका उम्मेदवारले नै स्थानीय स्तरका मुद्दाहरुलाई केन्द्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने तागत राख्द्छन् । सबै जात, वर्ग, धर्म तथा क्षेत्रका नेपालीलाई एक शुत्रमा बाँधि नेपाललाई विकास र समृद्धिको बाटोमा कांग्रेसले मात्र डोर्याउन सक्छ । नेपाली जनताको ७० बर्षको लडाइँ, त्याग र बलिदानबाट नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको हो । जसमा नेपाली कांग्रेसले अग्रणी भूमिका खेलेको छ । आज आएर कम्युनिष्टले लोकतन्त्र समाप्त गर्ने षडयन्त्र गर्दै छन् र यसको पक्षमा नेपाली जनता छैनन् । त्यसैले कांग्रेसको पक्षमा जनलहर आएको छ र कांग्रेसले अत्याधिक बहुमतले चुनाव जित्छ र काँग्रेसले नै सम्बृद्धीको यात्रा अघि बढाउछ् ।